IGugu leNani eliKhulu yinhlanganisela yemisebenzi yekhethelo ephatha imininingwane ebalulekile yenkolo nemfundiso yeBandla likaJesu Kristu labaNgcwele beziNsuku zokuGcina. Lemisebenzi yahunyushwa futhi yavezwa ngumPhrofethi uJoseph Smith, futhi eminingi yakhishwa kumaphephandaba eBandla ezinsukwini zakhe.
UNkulunkulu uzembula kuMose—UMose uyaguqulwa—Unqwamana noSathane—UMose ubona imihlaba eminingi enabantu kuyo—Imihlaba enganakubaleka yadalwa yiNdodana—Umsebenzi nenkazimulo kaNkulunkulu kuwukufeza ukungafi nokuphila okuphakade komuntu.
UNkulunkulu udala amazulu nomhlaba—Zonke izimo zempilo ziyadalwa—UNkulunkulu wenza umuntu futhi umnika ukubusa phezu kwazo zonke izinto.
UNkulunkulu wadala zonke izinto ngokomoya ngaphambi kokuba zibe ngokwemvelo emhlabeni—Wadala indoda, inyama yokuqala, emhlabeni—Owesifazane ungumsizi wendoda.
USathane waba kanjani ngudeveli—Ulinga u-Eva—U-Adamu no-Eva bawela esonweni, futhi ukufa kuyangena emhlabeni.
U-Adamu no-Eva bazala abantwana—U-Adamu wenza umnikelo futhi usebenzela uNkulunkulu—UKayini no-Abela bayazalwa—UKayini uyahlubuka, uthanda uSathane ngaphezu kukaNkulunkulu, futhi uba wukuLahlwa—Ukubulala nobubi kuyanda—Ivangeli liyashunyayelwa kusuka ekuqaleni.
Inzalo ka-Adamu igcina incwadi yokukhumbula—Isizukulwane sakhe esilungileyo sishumayela ukuphenduka—UNkulunkulu uyazembula ku-Enoke—U-Enoke ushumayela ivangeli—Isu lensindiso lembulwa ku-Adamu—Wafumana ukubhabhadiswa nobuphristi.
U-Enoke uyafundisa, uhola abantu, futhi ususa izintaba—Idolobha laseSiyoni liyamiswa—U-Enoke ubona ukuza kweNdodana yoMuntu, umnikelo Wayo ohlawulayo, novuko lwabaNgcwele—Ubona ukuBuyiselwa, ukuQoqwa, ukuZa kweSibili, nokubuya kweSiyoni.
UMetushela uyaphrofetha—UNowa namadodana akhe bashumayela ivangeli—Ububi buyabusa—Isicelo sokuphenduka asinakwa—UNkulunkulu umemezela ukufa kwayo yonke inyama ngesiKhukhula.
U-Abrahama ufuna ukuthola izibusiso zohlelo lobuphatriyakhi—Uhlushwa ngabaphristi bamanga eKalediya—UJehova uyamhlenga—Umdabuko nokubuswa kweGibithe kuyachazwa.
U-Abrahama uyahamba e-Uri uya eKhanani—UJehova uvela kuye eHarana—Zonke izibusiso zevangeli zithenjiswa enzalweni yakhe futhi ngenzalo yakhe kubo bonke—Uya eKhanani futhi uqhubekela eGibithe.
U-Abrahama ufunda ngelanga, inyanga, nezinkanyezi ngokusebenzisa i-Urimi neThumimi—INkosi imambulela ngokungafi kwemimoya—Ufunda ngempilo eyandulela eyasemhlabeni, ngokugcotshwa ngaphambi kokuzalwa, ngeNdalo, ngokukhethwa koMhlengi, nesimo sokuphila sesibili somuntu.
ONkulunkulu bahlela ukudalwa komhlaba nayo yonke impilo kuwo—Izinhlelo zabo zezinsuku eziyisithupha zendalo zibekwa obala.
ONkulunkulu bayaluqeda uhlelo Lwabo lwendalo yazo zonke izinto—Benza iNdalo ngokwezinhlelo zabo—U-Adamu wetha zonke izidalwa eziphilayo.
Joseph Smith—Mathewu 1
UJesu ubikezela ngokubhujiswa okuzokwenzeka kweJerusalema—Futhi ukhuluma ngokuZa kwesiBili kweNdodana yoMuntu, nokubhujiswa kwababi.
UJoseph Smith ukhuluma ngokhokho bakhe, amalungu omndeni, nalapho baqala ukuhlala khona—Ukwesasa okungajwayelekile ngenkolo kuyabusa entshonalanga neNew York—Uhlosa ukufuna ukuhlakanipha njengokuyalwa nguJakobe—UBaba neNdodana bayavela, futhi uJoseph ubizelwa ebufundisini bakhe bobuphrofethi. (Amavesi 1–20.)
ImiBhalo yoKholo 1
Sikholwa ku Nkulunkulu, uBaba waPhakade, nakuyo iNdodana Yakhe, uJesu Kristu, naku Moya oNgcwele.